Gaa Malta: “Lee” Malta Ugbu a, Njem Mgbe Emechara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Gaa Malta: “Lee” Malta Ugbu a, Njem Mgbe Emechara
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mediterenian agwaetiti nke Malta na-akpọ ndị mmadụ òkù ka ha gaa Malta ma chọpụta ọdịnala ha na afọ 7,000 nke akụkọ ntolite. Heritage Malta bụ ụlọ ọrụ mba Malta maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, omume nchekwa na ọdịnala ọdịnala. Heritage Malta ejikọtara ọnụ na Google iji nye ndị mmadụ ohere pụrụ iche ka ha gaa ileta ọtụtụ ihe ngosi nka na ebe nrụọrụ weebụ na saịtị site na ntanetị Google Arts & Culture.
Njem nlegharị anya nke ihe nketa nke Malta
Heritage Malta nwere saịtị 25 ugbu a ka ọ fọrọ nke nta ịgagharị ma gaa Malta. Nke a gụnyere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ arụsị, ogige, na ebe ochie. Malta bụkwa ebe obibi nke saịtị UNESCO nke atọ nwere ike ịchọpụta: obodo Valletta, Safal Saflieni Hypogeum na allọ Megalithic.
Obí nke Grandmaster
Na obodo Valletta, mmadụ nwere ike ile Obí Grandmaster anya ebe ọ nọ ọdụ na Office nke Onye isi ala Malta. Obí n’onwe ya bụ otu n’ime ụlọ izizi dị n’obodo ọhụrụ nke Valletta nke Grand Master Jean de Valette guzobere na 1566 ọnwa ole na ole ka ihe ịga nke ọma sitere na Great Siege nke Malta na 1565. Obí orylọ agha bụ otu n’ime nnukwu mkpokọta ụwa nke ogwe aka na ekike agha nke ka dị n'ụlọ mbụ ya. Ebe nrụọrụ weebụ na-enye ihe ngosi anọ dị n'ịntanetị nwere ike ile anya, veranda foto na ihe ngosi nka abụọ dị ka a ga - asị na mmadụ guzo n'ime ụlọ ihe ngosi nka.
Fort St Elmo dị na
Ọzọkwa na Valletta, mmadụ nwere ike ịga na Fort St. Elmo National War Museum. A na-egosipụta arịa dị iche iche n'usoro oge, malite na mmalite oge nke Ọchịchị Afọ gburugburu 2,500 BC A na-arara ụlọ nzukọ abụọ maka ọrụ dị mkpa Malta na WWI, Oge Inter-War na ọrụ Malta na akụkọ ihe mere eme na Agha Worldwa nke Abụọ ebe Gloster Sea Gladiator N5520 FAITH, Roosevelt's Jeep 'Husky' na Malta award maka gallantry, George Cross gosipụtara. Saịtị a gụnyere otu ihe ntanetị, ihe osise na 10 ngosi ihe ngosi nka nke ndị na-ekiri nwere ike inyocha.
Safal Saflieni Hypogeum dị na Raħal Ġdid. Hypogeum a bu oke okwute nke di n'okpuru ala nke ndi jiri ulo oru temple jiri ya me ya. Achọpụtara ya n'oge a na-ewu ya na 1902. Enwere ọkwa ala ala atọ nke sitere na 3600 ruo 2400 BC. E nwere otu ihe ngosi ntanetị na-ekpughere ebe a na-eli ozu ala ala, ebe a na-ese foto na otu ihe ngosi nka.
Temlọ Nsọ Ġgantija
Enwere ụlọ arụsị Megalithic asaa dị na agwaetiti Gozo na Malta, nke ọ bụla sitere na mmepe onwe onye. Ise n'ime asaa ndị ahụ nwere ike ịbịa leta. Ġlọ arụsị jagantija dị na Xagzora, Gozo bụ ndị ochie, ihe ncheta na-anaghị akwụ ụgwọ n'ụwa ma bụrụ ihe akaebe nke ebe obibi Island maka opekata mpe afọ 1,000 tupu ewu pyramid ndị Ijipt a ma ama nke Giza. Na ndị na-ekiri ihe na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ile anya na ihe ngosi ntanetị, ihe osise foto na ihe ngosi nka atọ.
Vidio Joseph Calleja
Ndi oti egwu na ndi ukwe na Malta n’eso uzo nke oria ojoo coronavirus ma na ekerita ihe ngosi ha n’igwe n’uwa nile ghota. Onye nwe ala Malta, Joseph Calleja gwara ndị Fans ya ka ha rịọ abụ na arias ha ga-achọ ịnụ ka ọ bụrụ abụ na ibe Facebook ya.
Ihe Nketa Mmiri Mmiri Malta Equinox Live Stream
A na-amara Malta Heritage maka ịhazi ihe omume kwa afọ maka ọha na eze iji hụ oge opupu ihe ubi na afọ a, kagbuo ya n'ihi COVID-19. Kama nke ahụ, ha na-ebi ndụ ihe omume na Facebook peeji nke ka onye ọ bụla ghara ịhapụ! Ihe omume a gosipụtara mmekọrịta pụrụ iche n’etiti temple na oge nile. Ka ụzarị ọkụ nke mbụ na-esi n'okporo ụzọ bụ isi nke ụlọ nsọ ndịda Mnajdra, ndị na-ekiri ha nwere ike ịhụ mmiri equinox dị n'ịntanetị.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, nke dị n’etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi dị oke ịtụnanya nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta wuru ndị Knights dị mpako nke St John bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na okwute sitere na ụlọ ọrụ okike kacha ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na usoro ndị agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na-atọ ụtọ, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ama ndi ozo banyere njem na Malta, gaa www.visitmalta.com.